Ndingayisebenzisa njani i-Instagram SEO?
Akukho mfuneko yokwazisa eli qonga le-intanethi ethandwa kakhulu, apho wonke umsebenzisi angaziva ngathi yinkqubo yobugcisa. Nanku kuza i-Instagram ngokwayo, ukuhambisa iifoto ezingaphezu kwezigidi ezingama-50 ezabelwana ngazo imihla ngemihla. Kwaye abaphulaphuli abemi be-Instagram baqhubeka banda, njengoko abaninzi abantu bebona amava abo ahlukeneyo, basebenza ngokufanelekileyo kwisihloko sokufota, kunye nokuhlanganisana ngokuphumelelayo neengongoma eziphezulu zentlalo yolwazi. Yingakho ingcamango ye-Instagram SEO ekukhuthazeni igunya loshishino, ukunyuka kwe-traffic flow, okanye nayiphi na umkhankaso wokuthengisa nge-digital kwiplatifti ayikho na isiphelo esitsha - umzug zuerich guenstig.
ukuhlela ngeempembelelo ezahlukeneyo okanye iifayile, kunye nokulungele ukungena kwi-hashtag ezivumela ukukhangela okujoliswe kuwo wonke umsebenzisi. Ngokuqinisekileyo naluphi na ubuchule bokufotshwa kweefoto lunokufumaneka apha - ukuqala kwi-selfies kunye neefayile eziviniweyo, kwiifriji zezithombe ze-intanethi.Oko kuthetha ukuba ne-akhawunti yezenhlalakahle kwi-Instagram inokuvumela ukuba ishishini lakho lifumane ithuba lokukhangisa kubathengi abanokubakho kwizinga ngalinye.
Ukuqhuba nayiphi na i-akhawunti yomntu ngamnye kwi-Instagram ngumsebenzi olula. Nangona kunjalo, kufuneka ugcine engqondweni izinto ezilandelayo ngaphambi kokungena kwi shishini. Okokuqala, akukho mfuneko apha ukuba ushicilele imifanekiso ekhwalithi kuphela emele ibhendi yakho yonke imihla. Ingcamango ebalulekileyo yenkonzo kukuba ukubonakala kwendalo kubonelelwa kumfanekiso, impendulo enamandla iyakwazi ukufumana. Ungalokothi usebenze ngendlela esemthethweni, njengoko abasebenzisi abanakuze bathandwe naloo nto. Phakathi kwezinto eziqhelekileyo ukuzenza, njengokucinga ngezicwangciso ezibonakalayo kunye nokunye, musa ukulibala ukufakela iphrofayili yakho esanda kuqalwa ngokuqhagamshelana ngqo ngqo kwiwebhusayithi yakho yezoshishino.
Yithi wamukelekile kwimincintiswano
Ukugcina umncintiswano wesithombe kwi-Instagram mhlawumbi indlela elula kakhulu yokuqinisa ubukho bakho bekhompyutha kwiindawo zakho zendawo, khumbulani wonke umsebenzisi othatha inxaxheba kwisiganeko sakho ngokuzenzekelayo ukukhuthaza i-brand yakho ngama-hashtag kunye nabalandeli bakhe okanye abahlobo. Kwaye umgangatho ophilileyo wokuba nenani elikhula ngokunyukayo labalandeli. Xa ufaka izicelo zama-hashtag, ndincoma ukuba abaphulaphuli bazi iinkcukacha eziphambili kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kwesiganeko esizayo. Ukuze wenze umncintiswano wakho uthathe inxaxheba, musa ukukhawuleza ukunikela umvuzo ofanelekileyo wokunyusa inyathelo lokwenene. Ngaloo ndlela, uya kufumana isikhangiso esincinci ngaphandle kokuchitha ipesenti, ngelixa unokuziva unobomi boqobo kunye nezinto ezikhethwa ngabathengi bakho.
Yenza okungaphezulu, uthathe inxaxheba ngaphezulu, kunye nomzila wendlela oza kukhula
Ingqiqo ephambili apha ukucinga ngama-hashtag kwi-Instagram njenge-SEO amagama angundoqo kunye neemeta tag. Khumbula, bekuya kuba "Instagram SEO" idinga intshiseko echanekileyo kunye nobuchule ukuba ihlale ibandakanyeka kunye nezihloko eziphambili kunye nabalandeli abafanelekileyo. Khawuleza uhlawule ixesha elaneleyo lokugcina ishedyuli yezikhundla ezithandekayo kunye nezimpendulo zempendulo ngokukhawuleza. Akukho mfuneko yokukhathazeka - imibhalo yesicatshulwa sokuqala yenza kakuhle kwi-Instagram SEO, njengenye indlela yendabuko yeendaba zoluntu. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba i-Instagram iyindawo yokwabelana ngememori, uhlale unamhlanje kunye neemveliso ezifanelekileyo okanye iinkonzo ezifanelekileyo.